Ohabolana Akondro mahia misy masaka, ka saro--dazaina aman-kavana. [Cousins 1871, Houlder 1895]
Akondro mahia misy masaka, ka saro--dazaina aman-tompony. [Cousins 1871]
Akondro mahia misy masaka ka saro--dazaina amin-kavana. [Rajemisa 1985 #557, Rinara 1974 #17]
Ohabolana Aza manao varo-tako-dRainitsilombonina: ny tompony indray no mifandrombaka. [Cousins 1871 #542]
Ohabolana Aza mivolon-ko tompony. [Cousins 1871 #684]
Ohabolana Fehitendan’ ny mpihaingo, ka izy tompony ihany no kendainy. [Nicol 1935 #261, Cousins 1871]
Ohabolana Lakan' Ambaravarambato : mandrendrika ny tompony. [Veyrières 1913 #6283, Rinara 1974 #1684, Cousins 1871 #1299]
Ohabolana Mindram-pangady lohataona, ka maniraka ny tompony hanao. [Cousins 1871 #1796, Nicol 1935 #60]
Ohabolana Mpanan-karena mahihitra : tsy tompony, fa mitahiry. [Veyrières 1913 #2312, Cousins 1871 #1959]
Ohabolana Tseroka an-tava iaraha-mahita, fa raha tsy ny tompony tsy mahafaka azy. [Rinara 1974 #4417, Cousins 1871 #3292, Veyrières 1913]
Ohabolana Voasary amoron-dalana : haka aho tsy tompony, hitoetra ihany maha-te-hihinana. [Veyrières 1913 #5838, Cousins 1871, Rinara 1974]